ငါ့ကိုအနီးအလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်း Philadelphia တွင် Pennsylvania ပြည်နယ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 215-631-3300 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. သင်သည်သင်၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်ဦးတည်ရာကိုခွဲထုတ်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးနေသော်လည်းတစ်နေရာရာမှာလျင်မြန်စွာရချင်လာတဲ့အခါ, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုလေကြောင်းခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်. ကံမကောင်းသဖြင့်, သင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲပေါ်တွင်သင်၏ရည်ရွယ်ဦးတည်ရာမှမဆိုရရှိနိုင်လေယာဉ်မျှမရှိစေခြင်းငှါ. တကယ်တော့, သာထိုလမ်းကြောင်းပျံသန်းလေကြောင်းလိုင်း၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ဖြစ်သူတို့ကတဦးတည်းပျံသန်းအသီးအသီးရှိစေခြင်းငှါ,, အရာအများစုကတနင်္ဂနွေကာလအတွင်းသို့မဟုတ်တနင်္လာနေ့လည်းကောင်းဖြစ်ကြသည်. သငျသညျစီမံခန့်ခွဲလိုလျှင်, လေယာဉ်ရဖို့, သင်မလုံလောက်သောခြေထောက်အခန်းနှင့်အတူမသက်မသာထိုင်ခုံ၌ကိုယ်ကိုကိုယ်သိနှင့်ညှစ်ကြဘူးလူတို့နှင့်အတူထိုင်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ကတည်းကသင့်ရဲ့ခရီးကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်. ထိရောက်မှု comport နှင့်မြန်နှုန်းကိုသင့်စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ Philadelphia တွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. သွားလာရန်လိုပေမည်. မှာကြှနျုပျတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါ 215-631-3300 Chartered အပေါ်အခမဲ့စျေးနှုန်းကိုးကားများအတွက်.
ဇိမ်ခံလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း Philadelphia တွင်
Philadelphia တွင်တစ်ဦးငှားရမ်းလေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှု operating အများအပြား FAA-အတည်ပြုကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းအားဖြင့်, သင်လိုချင်ကိုမဆိုဦးတည်ရာမှပျံသန်းနိုင်သည်, သငျသညျခငျြနှင့်လူများနှင့်အတူသွားလာတဲ့အခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်, မတယောက်တည်းလျှင်. ပုဂ္ဂလိကပဋိညဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုတစ်ခုတတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူဖောက်သည်များပေး, ဒါကြောင့်သင်တစ်ခုလုံးကိုအတှေ့အကွုံခံစားနိုငျ.
ကျနော်တို့ Philadelphia တွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်. ကျနော်တို့ခရီးသွားတွေအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုက်ညီမှလေယာဉ်ရွေးချယ်စရာများ. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျတစျခုလုံးကိုလေယာဉ်ငှားရမ်းဖို့ရှေးခယျြတပါးတည်းသာပျံသန်းနိုင်သည်, မိသားစုနှင့်အတူသို့မဟုတ်အလုပ်ကနေမိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ. သငျသညျပိုနှစ်သက်ဘယ်ဟာကို option ကို, သငျသညျလုံခြုံစိတ်ချစွာခရီးသွားလာ၏စိတ်ချပါနိုင်ပါတယ်, အဆင်ပြေစွာနဲ့အငြိမ့်. ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားများဈေးကွက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း. ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်စာရင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့ကို Call.
အခြားတည်နေရာကျွန်တော်တို့ပတ်လည် Philly ဧရိယာအစေခံ
Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး 19102
Philadelphia တွင်, ကန်ဒန်း, Gloucester စီးတီး, Oaklyn, Lansdowne, အထက် Darby, ဗလ Cynwyd, Merion ဘူတာ, Pennsauken, Darby, Collingswood, အမျိုးသားဥယျာဉ်, Merchantville, ဧဖရိမ်တောင်, Wynnewood, ရှာရုန်ဟေးလ်, Narberth, Audubon, Westville, Bellmawr, Drexel ဟေးလ်, Thorofare, Clifton မြင့်, ဟက်ဒေါ်မြင့်, Folcroft, Glenolden, ချယ်ရီဟေးလ်, Ardmore, Haddonfield, Havertown, ကေတီဟုမ်း, Cheltenham, Palmyra, Norwood, Barrington, Runnemede, Elkins ပန်းခြံ, Haverford, Woodbury, Gladwyne, အလားအလာပန်းခြံ, Essington, Morton, Riverton, မေပယ်အရိပ်, Paulsboro, Springfield, Lawnside, Glendora, Wyncote, Woodbury မြင့်, Folsom, Magnolia, Ridley ပန်းခြံ, Bryn Mawr, တောင်ပေါ်မှာတော်ဝင်, Swarthmore, Glenside, Lafayette ဟေးလ်, Broomall, Jenkintown, Wenonah, Somerdale, Gibbstown, Clarksboro, Woodlyn, Flourtown, Crum Lynne, Conshohocken, Oreland, Villanova, Moorestown, Mantua, Wallingford, Stratford, မီဒီယာ, Abington, မြစ်ကမ်း, Mickleton, ဝိန်း Fort ဝါရှင်တန်, Voorhees, Lenny, Blackwood, Grenloch, Plymouth အစည်းအဝေး, Chester, Brookhaven, Newtown ရင်ပြင်မှာ, Gibbsboro, Clementon, Huntingdon ချိုင့်, မိုးမခ Grove, Dresher, တောင်ပေါ်က Laurel, Bryn Athyn, Bridgeport, Bridgeport, အပြာရောင်ဘဲလ်, Sewell, ဝိန်း, Marlton, ရှား၏ရှငျဘုရငျသ, Fairview ကျေးရွာရှိ, နောရစ်, Glen ပုစ္ဆာ Lima, Devon, Ambler, Beverly, Aston, Pitman, အနောက်ဘာလင်, Hatboro, Willingboro, Bensalem, ချိုင့် Forge ရဲ့, Horsham, Berwyn, Swedesboro, Rancocas, နွေဦးအိမ်, Richwood, Mullica ဟေးလ်, Feasterville Trevose, Chester မြင့်, Gwynedd ချိုင့်, Marcus Hook, ဘာလင်, Croydon, Sicklerville, Ewan, Glassboro, Warminster, Gwynedd, Hainesport, Paoli, အရှေ့တောင်, Edgemont, ဆောက်သမ်တန်, gradyville, Concordville, Glen Mills က, Audubon, အနောက် Point သို့, မြောက်ကိုရီးယားဝေလ, ဘာလင်တန်, Montgomeryville, Claymont, Lumberton, Eagleville, Cheyney, Worcester, Harrisonville, Medford, Bristol က, Pedricktown, တောင်ပေါ်က Holly, Thornton, Warrington, Richboro, Atco, ဝီလ်မင်တန်, Levittown, Langhorne, Malvern, သပိတ်, Devault, Westtown, Lansdale, Clayton, Creamery, အာရဇ်ပင်တို့ကို, Jamison, Immaculata, Mont Clare, Collegeville, Monroeville, Kulpsville, ဖလော, Phoenixville, အာရဇ်ပင် Brook, Skippack, Colmar, အနောက်က Chester, Fairless တောင်တန်းများ, Chalfont, Waterford အလုပ်လုပ်, Penn Grove, Roebling, Mendenhall, Kemblesville, Woodstown, ဖာလုံ, Hatfield, Newtown, လိုင်း Lexington, Williamstown, Franklinville, Chadds Ford ကား, ဘာမင်ဂမ်, Wycombe, သစ်တော Grove, Rockland, Arcola, Harleysville, Lumberville, Vincentown, Lionville, Montchanin, Kimberton, Doylestown, ရေနက်ပိုင်းရေနံ, Winterthur, Rushland, Pineville, Holicong, Penn ပန်းခြံ, Exton, Souderton, Morrisville, ကိုလံဘတ်စ်, Royersford, Hilltown, Winslow, ဘာကင်ဟမ်, Franconia, Jobstown, Pocopson, Schwenksville, Pemberton, နွေဦးစီးတီး, Bordentown, Juliustown, Chester Springs, ဂါ, တိုက်, Lederach, Salfordville, Earlington, နွေဦးတောင်ကို, Fountainville, Telford, Elmer, Silverdale, ဝါရှင်တန် Crossing, Trenton, Birchrunville, yorklyn, နယူးလစ္စဘွန်း, က Parker Ford ကား, Newfield, Zieglerville, Pennsville, နယူးရဲတိုက်, ဒပ်ဘလင်မြို့, Alloway, နယူးမျှော်လင့်ချက်, Sell​​ersville, Salford, Deerfield လမ်း, Downingtown, Titusville, Kennett Square ကို, Woxall, Sumneytown, Perkasie, Hockessin, Uwchland, Crosswicks, Solebury, Hammonton, အစိမ်းရောင်လိန်း, Quinton, Danboro, ပွိုင့်သာယာသော, Plumsteadville, Gardenville, Perkiomenville, လမ်, Wrightstown, Newtonville, အုပ်ချုပ်, Pottstown, Thorndale, Lambertville, Glen Blooming, Landisville, အညိုရောင် Mills က, Carversville, Rosemont, Lahaska, Minotola, Glenmoore, Bedminster, Toughkenamon, Pennington, Vineland, Pipersville, ကောင်းသော, Cookstown, Rosenhayn, စိန့်ပီတာ, Milford ရင်ပြင်မှာ, Tylersport, Spinnerstown, Avondale, Gilbertsville, ဧဒုံဟေးလ်, Modena, ဖရက်ဒရစ်, Wagontown, Trumbauersville, Sergeantsville, sassamansville, Allentown, Pennsburg, ဝဲစီးတီး, Coatesville, ရှိလောမြို့၌, ဖွစျတဲ့စတော့ချ, Lyndell, Elwood, Newark, Bridgeton, Landenberg, Quakertown, Ottsville, Chatsworth, Richland, Brandamore, Hopewell, နယူး Berlinville, အရှေ့ဂရင်းဗိုင်း, Elverson, မိဇပါမြို့, ဝင်ဆာ, အနောက် Grove, နယူးအဲဂုတ္တုပြည်၌, ထင်းရှူး Forge ရဲ့, ဆိပ်ကမ်း Penn, Richlandtown, Hancock တံတား, ဝက်ဝံ, Boyertown, စိန့်ဇော့, Douglassville, Princeton လမ်းဆုံ, ရို, Pomeroy, Bechtelsville, Erwinna, မုန့် Ridge, ရင်ဂို, Bally, Sadsburyville, Barto, လက်ဝါး, Princeton, ရောနှော, Baptistown, ပျားရည် Brook, Frenchtown, Earlville, Imlaystown, Mays ကမ်းတက်, ဂရင်းနစ်, Geigertown, နယူးလန်ဒန်, Blawenburg, Fairton, Zionhill, Limeport, Hightstown, Skillman, Parkesburg, Cochranville, Hereford, Zionsville, ကြက်ဥဆိပ်ကမ်းမြို့, Millville, Suplee, အထက်က Black Eddy, Kelton, ဆတ် Mills က, လင်ကွန်းတက္ကသိုလ်က, Coopersburg, Kintnersville, Plainsboro, Roosevelt ရုစဗဲ့, Birdsboro, Morgantown, Monocacy ဘူတာ, Kingston, ကျောက်တောင်ဟေးလ်, အဟောငျး Zionsville, Cranbury, ဒေါ်ရသီ, မန်ချက်စတာမြို့နယ်, Kirkwood, Springtown, Elkton, Flemington, Perrineville, Clarksburg, Cedarville, Atglen, Durham, Lewisville, စင်တာချိုင့်, Middletown, Odessa, Riegelsville, Cologne, Oley, Emmaus, အပေါက်, Milford, Estell Manor, သုံး Bridges, Narvon, အရှေ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်, Macungie, အောက်စဖို့ဒ, Hellertown, Alburtis, Monmouth လမ်းဆုံ, Little က York မြို့, Pittstown, Belle Mead, နယူး Gretna, Neshanic ဘူတာ, Dayton, ဆိပ်ကမ်းအဲလစ်ဇဘက်, အဘိဓါန် Creek ဝေဖန်, Goodville, စာဖတ်ခြင်း, ခရစ္စတီးနား, Limekiln, Lakehurst, Kendall ပန်းခြံ, ကလေး, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, ဗက်လင်မြို့, ဆိပ်ကမ်းသမ္မတနိုင်ငံ, Newport, Lehigh ချိုင့်, Mertztown, Chesapeake စီးတီး, Franklin ဟာပန်းခြံ, Flagtown, Kinzers, Hillsborough, Quakertown, Pomona, Mauricetown, မွန်ရိုးမြို့နယ်, Allentown, Oceanville, Mohnton, Trexlertown, အရှေ့ Earl, Townsend, Bowmansville, Topton, Readington, Bower, Dorchester, လိုင်ယွန်ဘူတာ, Bart, ဇရတ်တမွို့, Toms မြစ်, ဆိပ်ကမ်း Norris က, Bloomsbury, Annandale, Fleetwood, အရှေ့မြောက်, Warwick, Breinigsville, Stanton တို့, Kirkwood, ကြက်ဥဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်, Absecon, Tuckerton, Adelphia, Terre ဟေးလ်, Barnegat, Tuckahoe, နတ်ဘုံနတ်နန်း, Helmetta, Leesburg, Fortescue, ကလင်တန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, Asbury, နယူးဟော်လန်, Englishtown, Somerville, မြောက်ကိုရီးယား Brunswick, Maxatawny, Whitehouse ဘူတာ, Rising Sun က, ဗိမာနျတျော, Charlestown, အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်း, အပြာရောင်ဘောလုံး, Manville, Smyrna, Woodbine, အနောက်အဘိဓါန် Creek, Blandon, Manahawkin, Spotswood, လေဗနုန်တော, အိမ်ဖြူတော်, Raritan, Freehold, Fogelsville, လိဒ် Point သို့, Waretown, Catasauqua, Adamstown, Whitehall, Pleasantville, အမြင့်တံတား, Kutztown, Milltown, Somerset, Tennent, Northfield, Orefield, Linwood, အရှေ့ Brunswick, Martindale, Bridgewater, Coplay, Somers Point သို့, အရောင်အဆင်း, နယူး Brunswick, cecilton, Brook ထုပ် ထား. တောင်ပိုင်း, တောင်ပိုင်းမြစ်, Perryville, Reinholds, Pluckemin, ခညျြနှောငျ Brook, အဟောငျးတံတား, ဆိပ်ကမ်း Deposit, မာလ်ဘိုရို, Virginville, အဘိဓါန် Highland ပန်းခြံ, Clayton, Marmora, Leesport, Martinsville, ပယ်ရီ Point သို့, Schnecksville, Wernersville, Galena, Morganville, Bedminster, Margate စီးတီး, Middlesex, Longport, Ventnor စီးတီး, ဂျော့တောင်း, Earleville, Sayreville, Massey, Piscataway, Stony Run ကို, အတ္တလန္တိတ်စီးတီး, အက်ဒီဆင်, သမုဒ်ဒရာစီးတီး, Brigantine, Shoemakersville, နယူးထရီပိုလီ, Lenhartsville, Dunellen, Parlin, Centerport, Mohr Ville, Kempton, Matawan, Warren, တောင်ပိုင်းလိန်းဖီးလ်ဒ, လိန်းဖီးလ်ဒ, Metuchen, တောင်ပိုင်း Amboy, Cliffwood, ဟမ်းဘတ်, Keasbey, Millington, Kennedyville, Ford, Millington, Watchung, Stirling, ပါ့သ Amboy, Iselin, Staten ကျွန်း, Betterton, Woodbridge, ဆိပ်ကမ်းကလင်တန်, Fanwood, Colonia, Scotch Plains, ဘာကလေမြင့်, Shartlesville, Sewaren, သို့တိုင်ရေကန်, Crumpton, Avenel, ဆိပ်ကမ်းစာဖတ်ခြင်း, Clark က, Westfield, Rahway, Garwood, Carteret, Cranford, Worton, Linden, Orwigsburg, Kenilworth, Roselle, Roselle ပန်းခြံ, အဲလစ်ဇဘက်
ဆိုသူက Bakersfield မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, , CA